Posted by Blogger Crazy in Sunday, February 7, 2016
တိုက်ဆိုင်ကြီး နေ့ ခင်းဘက်လူနေအိမ်ခြေကျဲတဲ့ တောသာသာရွာ စွန်မှာကျုပ်တစ်ယောက်တည်းနေနေရတယ်ကျုပ်ကံ ကဆိုးတယ်အခုအသက်၇၀အဖွားကြီးပေမယ့် ဆွေ မျိုးကလည်းမရှိယောက်ကျားကလည်း၁၀နှစ်ပဲပေါင်း ရတယ်ဆုံးသွားပြီတစ်သက်လုံးကောက်ရိတ်ကောက် စိုက်အသက်မွေးရင်းနဲ့ အသက်၃၀မှကိုသာအေးနဲ့ အိ မ်ထောင်ကျခဲ့ တာ သူကငါးရှာဖားရှာရောင်းချကျွေးခဲ့ပါတယ်ကျုပ်သူ့ ရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ပျော်ကောင်းတုန်းမှာ သူ့ အသက်၄၅ကျုပ်က၄၀မှာသူပိုးထိပြီးသေခဲ့ တယ် ကျုပ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးကမရှိတော့ ဘူး ဒါနဲ့ ပြောရဦးမ ယ်ကျုပ်ဒီသက်ရွယ်နဲ့ မပူမပင်နေနိုင်တာကိုသာအေး နဲ့ ရတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ အသက်ကြီးမှမွေးတဲ့ တစ်ဦးတည်း သောသားကြီးကြောင့် ပေါ့ ကံဆိုးတဲ့ ဘဝတူချင်းမို့လားမသိသားကြီးကမွေးတည်းကဆွံ့ အ နားမကြား ခြေထောက်ကလည်းသိပ်မသန် ကျပ်မပြည့် ရှာပေ မယ့် ကျုပ်တို့ လင်မယားကသူ့ ကိုလူချောလို့ အမည် ပေးခဲ့ တယ်သူ၇နှစ်အရွယ်မှာသူ့ အဖေဆုံးတော့ကျုပ်ကကြုံရာလုပ်ပြီးရှာကျွေးခဲ့ တယ် ကျုပ်အသက်ကြီးပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ ကျုပ်ကို သူရှာကျွေးမယ်ပြောရှာတယ် လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပေါ့သူလိုမစွမ်းမသန်လေးကဘာလုပ်မလဲတောင်း ရမ်းစားရတာပေါ့ ကျုပ်တို့ ရွာလေးကလည်းတောကျ တာမှ လမ်းမရှိဘူးတစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်လှေနဲ့ သွားရတာ လူချောကကျုပ်ကိုနားခိုင်းပြီးလှေလေးနဲ့ရွာစဉ်လှည့် ပြီးခွက်လေးနဲ့ တောင်းရမ်းရှာတယ်ရွာက လည်းမိခင်ကြီးကိုလုပ်ကျွေးတာသိတော့ ထမင်းဟင်း ပိုက်ဆံလှူကြပါတယ်တစ်ရွာလုံးကသူ့ ကိုတိုက်ဆိုင် ကြီးလို့ ခေါ်ကြတယ်သူကရုပ်လည်းဆိုးတော့ စပြီး aခ်ါကြတာနေမှာပေါ့ ကျုပ်သားကလေအလှူ တွေမှာသူ့ ကိုသနားတဲ့ ရွာသားတွေကထမင်းစားဖို့aခ်ါရင်လုံးဝမစားဘူးလက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ အမေ့ ဖို့ ထ မင်းထုပ်ပေးပါပြောရှာတယ်အဲလိုထမင်းထုပ်ကျုပ်တွက် ရမှသူကတတ်စားတယ်အစနောက်သန်တဲ့ သူ တွေကသူ့ ခွက်လေးကိုလုပြီး မင်းအမေမပေးနဲ့ ငါတို့ယူပြီပြောရင် ဝူးဝူးဝါးဝါးပြောပြီးလှေလေးလှော်ပြီးပြေး တာနောက်ကိုအဲဒီ့ အိမ်ဘယ်တော့ မှသူမသွားတော့ဘူးသူဘုရားတရားနားလည်ရှာတယ်ကျုပ်ဘုရားရှိခိုး ရင်လိုက်ပြီးဦးချရှာတယ်တစ်ရွာလုံးကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြတယ်ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကျုပ်အိမ်မက်မက်တယ်ကျုပ်သားကကျုပ်ရွာနဲ့ ဝေး ဝေးမှာအိမ်ဆောက်နေတယ်ကျုပ်ရွာကရွာသားတွေနဲ့လည်းကျုပ်မတွေ့ ရဘူးပြောရရင်အိမ်ပြောင်းသွားတာ ပေါ့ ကျုပ်သားကစကားပြောတယ် အမေသားတို့ နေရာလေးကိုရောင်းလိုက်ပြီဒီနေရာလေးကိုသားဝယ် ထားတာလူသူတော့ ပြတ်တယ်ဒါပေမယ့် အမေ့ ကို သားဂရုစိုက်မှာပါ အမေသားကိုဒီအိမ်မှာနေခွင့် ပြုပါ နော် အာနေပေါ့ သားရယ်အမေ့ အိမ်ကမင်းအိမ်ပဲလေ သားကအိမ်လည်းဆောက်စကားလည်းပြောတတ်နေတော့ကျုပ်ဝမ်းသာတယ်ငယ်ငယ်တည်းကစကား မပြောတတ်တဲ့ ကလေးအခုအသက်၃၇ကျမစကား ပြောနေပြီလေကျုပ်ဝမ်းသာအားရသားကိုဖက်လိုက် တယ်****ဟင်သားကိုယ်လုံးကအေးစက်နေပါလား ကျုပ်သားကလှေလေးနဲ့ လှော်ပြီးအိမ်သစ်ကိုခေါ်လာ တယ်ပေါ့ ကျုပ်အိမ်မက်ကလန့် နိုးတော့ အမှန်ပဲအိမ် သစ်တစ်ခုကိုရောက်နေတယ် ကျုပ်ဘေးမှာသားက ထိုင်လို့ ကျုပ်မေးတော့ သားကအိမ်ပြောင်းလာတာ အမေမေ့ နေတာဖြစ်မယ်ပြောရှာတယ်အိမ်မက်ထဲက လိုစကားမပြောတတ် လက်ဟန်နှင့် ဝူးဝူးဝါးဝါးပြော ခြင်းသာသားကမိုးလင်းရင်ထုံးစံအတိုင်းရှာကျွေးတယ် ဒါပေမယ့် သားကအသက်ကြီးမှကံဆိုးရှာတယ် ငယ်ငယ်ကဘုရားတရားသိတဲ့ ကလေးအခုကျုပ် ဘုရားရှိခိုးရင်ထွက်သွားတယ်ပြီးမှပြန်လာပြီးဘုရားပုံ တွေအိမ်မှာမထားဖို့ အမေရှိခိုချင်ရင်သူမရှိတုံးရှိခိုးပါ သူပင်ပန်းလို့ နားဆူတယ်ပြောတယ်ကျုပ်လည်းဝမ်း နည်းစွာနဲ့ ပုံတော်တွေစွန့် ပြီးသူသွားမှရှိခိုးရတယ်သူ ကျွေးတာစားနေရတာကိုးကျုပ်သားကိုစိတ်နာတယ် သူရှာကျွေးပေမယ့် ဘုရားတောင်မကိုးကွယ်ရဘူး ကျုပ်နေတဲ့ ရွာကိုလည်းခွဲရတယ်ကျုပ်ကမသွားနိုင်မလာ နိုင်ဆိုတော့ အခုနေတာဘယ်နေရာမှန်းမသိမျက်စိကလည်းမှုန်တ ယ်လေတစ်နေ့ မှာအိမ်ကိုရေလာတောင်းသောက် တယ့်ကျုပ်တို့ ရွာကမှုန်ကြီးတို့ လင်မယားနဲ့ တွေ့ ရတယ် ကျုပ်ကမသိပါဘူးသူတို့ ကပြောတာသူတို့ ငါး ရှာရင်းလမ်းမှားလာတယ်ပြောတာပဲကျုပ်ကအိမ်မှာည အိပ်ဖို့ သူတို့ လင်မယားကိုပြောတယ်သူတို့ လည်းလက်ခံပြီး ကျုပ်နဲ့ စကားပြောရင်းမေးတယ်ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း ဘယ်လိုနေလဲပေါ့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်သားကတစ် သက်လုံးရှာကျွေးနေတာဘယ်ကတစ်ယောက်တည်း ရမလဲညကြရင်သူပြန်လာတာပြောတော့ လင်မယား နှစ်ယောက်လုံးအရေးကြီးတယ်ကလေးနို့ စို့ လေးထားခဲ့ရလို့ ဆိုပြီးပြန်သွားကြတယ်တော်တော် ခက်တဲ့ လင်မယားညအိပ်မယ်ဆိုပြီးဘာမှန်မသိဘူး သူတို့ သွားပြီးသိပ်မကြာကျုပ်သားပြန်လာတယ်မျက် နာလည်းမကောင်းဘူး ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ စက်လှေကြီးတစ်စင်းရောက်လာ တယ်ကျုပ်ဝမ်းသာလိုက်တာလှေပေါ်မှာကျုပ်တို့ ရွာလူကြီး ဦးဘအောင်ဘုန်းကြီး၃ပါးနဲ့ ရွာကလူစုစု ပေါင်း၁၀ခန့် ရှိတယ်သူတို့ ကကျုပ်တဲလေးမှာတရား နာဖို့ တဲ့ ဒီလိုနဲ့ စုပြီးတရားနာကြတယ်ပြီးတော့ အမျ ဝေတော့ သူကြီးကပြောတာကြောင့် ကျုပ်အံ့ သြ ရတယ် ကဲတိုက်ဆိုင်ကြီးရေမင်းအမေကိုတို့ စောင့် ရှောက်ပါ့မယ်မင်းလာပါသာဓုခေါ်ပါတဲ့သူတို့ ပြောနေတာက ဘာတွေလဲသားကိုကျမတွေ့ ရတယ်အဝေးကကြည့်နေတယ်မလာဘူး ရွာထဲကပါလာတယ့် ရွာသားတစ်ဦးကကျမကိုပြော တယ်ကျမသားဆုံးတာ၅နှစ်ရှိပြီတဲ့ ကျမငိုမိတယ်ဒါဆို သားက ရွာသားတွေကဖြောင်းဖြကြတယ်ကျမကို စိတ်မချလို့ ဝိညဉ်ဘဝရောက်နေတာဖြစ်လို့ မငိုဘဲသူ စိတ်ချအောင်ပြပြီးသာဓုခေါ်ခိုင်းပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ငိုလို့ မဖြစ်ဘူး ကျုပ်သားကိုပြုံးပြီးခေါ်လိုက်တယ်သားရယ်အမေကို စောင့် ရှောက်မယ့် သူရှိပါတယ်သားသာဓုခေါ်နော် သူမလာဘူးမျက်ရည်ဝိုင်းပြီးကျမကိုကြည့် နေတယ် ကျုပ်ကိုခွဲရမှာစိုးလို့ ထင်တယ် ကျုပ်ကြမ်းလိုက်တယ် နင်မလာရင်တစ်သက်လုံးနင့်ကိုငါမုန်းမှာနော် အဲလိုပြောတော့ မှကျုပ်သားမျက်ရည်တွေကျပြီးသူ့သတ်မှတ်နေရာမှာလာထိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့ သာဓုခေါ်ပြီး ချိန်မှာသားကျုပ်ကိုနူတ်ဆက်တယ်အမွှေးနံ့ တွေရ လိုက်တယ်သူကောင်းရာဘဝကူးပါပြီ ကျုပ်သိရတာကကျုပ်သားနေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင် အလှူခံထွက်ရင်းအအေးပတ်လို့ လှေပေါ်မှာသေနေ သည်ကိုရွာသားတွေမြေမြုပ်ပေးပြီးတစ်ယောက်တည်း ကျန်သည့် ကျုပ်ကိုလာရှာတော့ မတွေ့ တော့ကြောင်းရွာထဲကလူတစ်ယောက်ကိုသူဝင်ပူးပြီးသူအ မေကိုစိတ်မချပြီးခေါ်ထားကြောင်းသူမနက်တိုင်းအ လှူခံမည်ဖြစ်ပြီးလှူချင်သူများကမိမိတို့ နေအိမ်တံတား ထိပ်တွင်ခွက်ကလေးတစ်ခုဖြင့် ပေး ချင်တာထည့် ပါဟုပြောကြောင်းနှင့် တစ်ရွာလုံးကသ နားပြီးတံတားလေးများထိပ်တွင်မိုးမလင်းမှီလှူချင်တာ များထည့် ထားကြောင်းသူလာနေကြအချိန်ဝေလီဝေ လင်းတွင်လှေလေးလှော်ပြီးပစည်းလိုက်သိမ်းသည့်သူ့ ကိုတွေ့ ရကြောင်းနှင့်မိမိတို့ ရွာတွင်နယ်မြေကြမ်းပြီး သရဲခြောက်သောကြောင့် ရွာသားများမသွားသည့်ရွာနှင့် တော်တော်ဝေးသည့် ကျွန်းညိုကြီးတွင်မှုံကြီးတို့လင်မယားငါးရှာပြီးမျက်စိလည်ရောက်သွားရမှကျုပ်ကို aတွ့ ပြီးလာခေါ်သည်ကိုသိရပါသည် ထိုချိန်မှစပြီးမိုးလင်းရင်လာရောက်တောင်းရမ်းသည့်တိုက်ဆိုင်ကြီးကိုမတွေ့ ရတော့ ပေ မှတ်ချက် ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံပြီးတိုက်ဆိုင်ကြီး သည်တကယ်ရှိခဲ့ ပါသည် Credit - Ta Say Credit - စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ်ပရလောကနယ်
Posted by Blogger Crazy
ညဟာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ အရွတ်စိမ်းစိမ်းတွေ ပျောက်လုမတက် ဖွေးနေအောင် ပွင့်နေတဲ့ စံပါယ်ခြုံနားမှာ ရပ်ရင်း မီးလင်းနေတဲ့ ငယ်အခန်းကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ညလေပြေက တဖြည်းဖြည်း တိုက်နေတယ်။ ခပ်သင်းသင်းမွှေးနေတဲ့ စံပါယ် ရနံ့တွေနဲ့အတူ့ ငယ်နဲ့ ကျွန်တော် fb သုံးရင်း လိုင်းပေါ်မှာစတင်ခင်ခဲ့တယ်။ ငယ်နာမည်က လွမ်းရိပ်ငယ်တဲ့။ ငယ်လို့ ကျွန်တော် ခေါ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် နာမည်က ရဲလင်းနိုင်။ ငယ်က ကျွန်တော်ကို နိုင်လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်က တောင်ငူမှာနေပြီး ငယ်က မြစ်ကြီးနားမှာ နေတယ်။ အပြင်မှာဆို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံ ခင်မင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကို ရေစက်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြရင်းနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ငယ်မှာ တူညီတာတွေ တော်တော် များမှန်းသိခဲ့ရတယ်။ ဥပမာ သွေးအုပ်စုတူတာ။ မတည့်တဲ့ အစားအစာချင်း တူတာမျိုး။ ပြီးတော့ ငယ်က ကဗျာတွေ ကိုချစ်တယ်။ ကျွန်တော်က ကဗျာတွေ ဖွဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေ ပိုရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ငယ်ကြားမှာ ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ညမှာ ကျွန်တော် အိပ်နေရင်း ညနှစ်ချက်တီးသာသာမှာ လန့်နိုးလာတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ငယ်ငိုနေတယ်။ ကျွန်တော် ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ လိုင်းကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ငယ်ရဲ့ acc မီးလေး စိမ်းလာတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် စာပို့လိုက်တယ်။ ငယ်မအိပ်သေးဘူးလားလို့။ အဲဒီညမှာ ကျွန်တော် မသိလိုက်တဲ့ ငယ်ဘဝရဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို သိခဲ့ရတယ်။ ငယ်မှာ ရည်မှန်းထားတဲ့လူ ရှိမှန်း သိလိုက်ရပြီ ကျွန်တော် ငယ်ကို ချစ်နေခဲ့ပြီးမှန်းလည်း သိလိုက်ရတယ်။ ငယ်ကို ကျွန်တော် မမြင်ဘူးပဲနဲ့ပေါ့။ ငယ်ကို နှစ်သိမ့်ရင်း ငယ်နဲ့ အတူ ကျွန်တော် ငိုနေခဲ့တာ ငယ်မသိဘူး။ ငယ်ကတော့ ကျွန်တော်ကို အစ်ကို တစ်ယောက်လို အရင်ကထက် ပိုတွယ်တာလာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ကျွန်တော်ကတော့့ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ငယ်ရဲ့ ကျွန်တော် အပေါ်ထားတဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားမှုတွေ မပျက်စီးစေဖို့ စောင့်ထိန်းခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ကို စိတ်မညစ်စေချင်ခဲ့ဘူး။ သူလို အပ်ချိန်တိုင်း ကျွန်တော်ရဲ့ ရင်ဘက်ကို အမြဲငှားခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ငယ် ကျွန်တော်ရဲ့ နှစ်ဆယ့် သုံးနှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်ပို့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် နာမည် အတိုကောက် ရေးထားတဲ့ ဆွဲပြားလေးနဲ့ ဆွဲကြိုးလေးပေါ့။ ငယ်နဲ့ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံတွေလည်း လဲပို့ခဲ့ကြတယ်။ မမြင်ဘူးခင်ထဲက ချစ်ခဲ့မိတဲ့ ကျွန်တော် ငယ်ဓာတ်ပုံကို မြင်တော့ ပိုမြတ်နိုးခဲ့မိတယ်။ ငယ်ကတော့ မသိနိုင်ဘူးလေ။ ဒီလိုနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ရင်း သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ သဘောင်္ လိုက်နေတဲ့ ငယ်ရည်ရွယ် သူလည်း ပြန်လာကာနီးပြီးပေါ့ ။ အဲဒီအချိန်မှာ ငယ်တို့ မြို့မှာ လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ စိတ္တဇဓားသမားဟာ မိန်းကလေးတွေကို ပစ်မှတ်ထား လူသတ်လာတယ်လေ။ ညရှစ်နာရီမှ အလုပ်ဆင်းရတဲ့ ငယ် အတွက် ကျွန်တော် စိတ်ပူလာခဲ့တယ်။ ငယ်ဆီကနေ ဘယ်တုန်းကမှ တောင်းယူဖို့ မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ ငယ်ဖုန်းနံပါတ်ကို တောင်းခဲ့တယ်။ ငယ်အလုပ်ဆင်းလို့ အိမ်ပြန်ချိန် ညတိုင်း ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။ ဒီလောက် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးလို ငယ်ပြောပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ပူနေမိတယ်။ သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဘူးငယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ လူသတ်သမားက မိန်းကလေး သုံးယောက်ကို သတ်ခဲ့ပြီး ပြီလေ ခုထိမှ မမိသေးတာ။ အဲဒီနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့။ ညရှစ်နာရီ ထိုးတော့မယ်။ ဧည့်သည်ကို လိုက်ပို့ပြီး တော့ ကျွန်တော် ငယ်ဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ကဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဆွဲနေတဲ့သူလေ။ ဖုန်းက ငယ်ဆီ ချက်ခြင်းမဝင်ဘူး။ လေးခါ ဆက်တိုက် ခေါ်လိုက်မှ ဝင်သွားတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ထင်သွားတယ်။ ဖုန်းဝင်သွားတာနဲ့ ငယ် ဘာဖြစ်နေတာလည်း။ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ။ ဒီဘက်မှာ အခါ မဟုတ် မိုးနည်းနည်း ရွာနေလို လိုင်းမမိတာပါတဲ့။ ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းထွတ်လာခဲ့တယ်။ ငယ်နဲ့စကားပြောရင်းပေါ့။့့။့ ငယ် ဘာဖြစ်နေတာလည်း။ နိုင်ရဲ့ စိုးရိပ်တကြီးမေးသံကြောင့် ငယ်ရယ်လိုက်မိတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီမှာ မိုးနည်းနည်း ရွာနေလို့ လိုင်းမမိတာပါ နိုင်ရယ်။ ဟုတ်လားငယ်။ ငယ်တို့လမ်းထဲ ရောက်ပြီလား။ ရောက်ပြီနိုင်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာဂရုစိုက်နော် လူပြတ်တယ်မဟုတ်လား။ နေ့တိုင်းပြောနေကြ မရိုးနိုင်တဲ့စကားကို နိုင်ကပြောတယ်။ ငယ်လည်း ဖြေနေကြအတိုင်း အေးပါ သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့ နိုင်။ လို့ဖြေရင်း စကားတစ်ပြောပြောနဲ့ လျှောက်လာခဲ့တယ်။ ငယ်တို့အိမ် မရောက်ခင် လမ်းကွေ့လေးမှာ ဝုန်း ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ရှုပ်ထွေးဆူညံ့သံတွေကို ဖုန်းထဲကနေ ငယ် ကြားလိုက်ရတယ်။ နိုင့် ငယ်ခေါ်လိုက်မိတယ်။ တပြိုင်နက်မှာပဲ ငယ်လက်ထဲက ဖုန်းကို တစ်စုံ တစ်ယောက်က ပုတ်ချလိုက်တယ်။ ဖုန်း မြေပေါ် လွှတ်ကြသွားပြီး ငယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုကို ခံလိုက်ရတယ်။ လည်းပင်းကို ချွန်ုမြတဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့ ထောက်ထားခြင်းခံထားရတယ်။ ငယ်သိလိုက်ပြီ ငယ်တို့ မြို့မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ စိတ္တဇ လူသတ်သမား လက်ထဲ ငယ်ရောက်နေပြီဆိုတာ။ ကျသွားတဲ့ ဖုန်းလေးကို အားကိုးတကြီး ကြည့်ရင်း ငယ်ကို ကယ်ပါ နိုင်ရယ်လို့ ပြောနေမိတယ်။ လူသတ်သမားက ငယ်ကို ခြုံထဲ ဆွဲသွင်းဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ငယ်ရုန်းဖို့ ကြိုးစားတိုင်း ဓားက လည်ပင်းကို တိုးနစ်လာတယ်။ သွေးစက်အချို့ ပုခုံးပေါ် စီးကြလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ငယ် ဘဝဆုံးရတော့ မှာလား နိုင်ရေ။ ဖောင်း လူသတ်သမားကို မဲမဲအရိပ်တစ်ခုကနောက်က ရိုက်လိုက်တယ်။ အရှိန်နဲ့ လူသတ်သမား ဟန်ချက်ပျက်သွားပြီး ငယ်ကို ထောက်ထားတဲ့ ဓားလွှတ်သွားတယ်။ လူသတ်သမားနဲ့ အဲ့အရိပ် လုံးထွေး သတ်ပုတ်နေတုန်း ငယ်နေရာက ပြေးထွတ်လာခဲ့တယ်။ အကူညီတောင်းဖို့ပေါ့။ ကယ်ကြပါ့အုံး။ ငယ်အသံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ လမ်းကလေးကို လွှမ်းသွားတယ်။ ဓမ္မာရုံထဲက လူတွေ ပြေးထွတ်လာကြတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာရောင်တော့ လူသတ်သမားဟာ လမ်းဘေးမှာလဲနေတယ်။ ငယ်ကို ကူညီတဲ့ အရိပ်လူကို မတွေ့တော့ဘူး။ လူသတ်သမားကို ဖမ်းတုပ်နှောင် ခေါ်သွားကြတယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ကျကျန်နေတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ငယ် ကောက်ယူလိုက်တယ်။ ဆွဲကြိုးလေး။ တုန်ယင်နေတဲ့ လက်တွေနဲ့ ဆွဲကြိုးလေးက လောကပ်သီးလေးကို ငယ်ကြည့်လိုက်တယ်။ Y L N စာတန်းလေး မမှားနိုင်ဘူး ဒါ ငယ် နိုင်ကို မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဆွဲကြိုးလေး။ နိုင့် ငယ်အော်ခေါ် လိုက်မိတယ်။ လူတွေ ငယ်ကို နားမလည်သလို ကြည့်တယ်။ ငယ်ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ နိုင့် နိုင့် တဖွဲ ဖွဲ ကြနေခဲ့တဲ့ မိုးစက်တွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကျလာတယ်။ ဖုန်းလေးကို ခေါ်လိုက်တယ်။ လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော ဖုန်းသည့့့့့် ညဟာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ပြတင်း တံခါးမှာ ရပ်ရင်း ငယ်ခြံထဲကြည့်မိတယ်။ သိမှတ်မဲ့စွာ ငယ်ခြံထဲ ဆင်းလာမိတယ်။ စံပါယ်ရုံနားမှာ ရပ်လိုက်မိတယ်။ ညလေပြေက တဖြည်းဖြည်းတိုက်တယ်။ စံပါယ် ရနံ့တွေကလည်း သင်းလို့။ ငယ်။ နိုင် နိုင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးနော်။ အင်း ငါဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ငယ် နိုင်ကို စိတ်ပူနေတာ ဘယ်လိုလုပ် အဲဒီကို ရောက်လာတာလည်း။ ခုရော ဘယ်လိုရောက်နေတာလည်း။ တရပ်ဆက်မေးနေတဲ့ ငယ်အမေးတွေကို သူမဖြေ သေးပဲ ငယ်ကိုပဲ ငေးနေတယ်။ ငယ့့်။ သူ ငယ်ကို ကြည့်ရင်း စို့စို့ နစ်နစ်ခေါ်တယ်။ ငယ်ကို ပြောစရာရှိတယ်။ ငယ် အလျှင်အမြန်ပဲ ပြောလိုက် တားလိုက်မိတယ် မပြောပါနဲ့ နိုင်။ အချို့စကားတွေက မပြောတာပဲကောင်းတယ်။ ငယ် ငါ ဘာပြောမယ်ဆိုတာ ငယ်သိနေလို့လား။ နိုင်ကို ငယ်ငေးကြည့်မိတယ်။ ခေါင်းကို ခပ်ဖြေးဖြေး ငြိမ့်လိုက်မိတယ်။ သူပြုံးတယ် နာကြင်မှုတွေ ဆွတ်နေတဲ့အပြုံး။ အိုကေ ငါ မပြောတော့ပါဘူးငယ်။ ငယ် ပျော်နေတာပဲ အမြဲ မြင်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတ်ာယုံပါ။ ငယ် ဘဝ အေးချမ်းပါစေ နိုင်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ငယ် ။ ငယ် အလိုအပ်ဆုံး အချိန်မှာ နိုင် အရောက် လာပေးခဲ့ပါတယ်။ ခု နိုင် ငယ့် နားမှာမနေပေးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလိုလည်း နိုင် ဘာလို့လည်း။ ငယ်အမေးကို နိုင် မဖြေဘူး။ နိုင် ပြုံးတယ် ပြုံးတယ် ငယ်ကို စူးစူးနစ်နစ် ငေးရင်း နာကြင်မှုဆွတ်နေတဲ့ အပြုံးတွေ နဲ့ ။ ပြီးတော့ နိုင်မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ နိုင့် ငယ်မြင်နေတဲ့ နိုင် အရိပ်က တဖြည်းဖြည်း ဝါးလာတယ် ။ နိုင်ရဲ့ မျက်ရည် တစ်စက် က ပါးပေါ်ကနေ လိမ့်ဆင်းလာတယ်။ အမှတ်မဲ့စွာ မျက်ရည်စက်လေး မြေပေါ် မကျခင် ငယ် လက်ဖဝါးလေးနဲ့ ဖမ်းခံလိုက်မိတယ်။ မျက်ရည်စက်လေး ငယ်လက်ဖဝါးပေါ် အကျ နိုင် ငယ် ရှေ့က လုံးဝပျောက်သွားတယ်။ နိုင့့် သမီး ထတော့ ။ ငယ် မေမေရဲ့ နိုးသံကြောင့် ငယ်နိုးလာတယ်။ စောနက ငယ် အိပ်မက် မက်နေတာပေါ့။ ဒီနေ့ ငယ် လက်ထက်တော့မယ့်နေ့ ။ ငယ် မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲကို နိုင် လာမှာပါ ။ တက်ကြွသွားတဲ့ စိတ်နဲ့ ငယ် အလှဆုံး သတိုးသမီးလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလေ။ လှပတဲ့ သတိုးသမီးလေးကို ငေးရင်း နိုင်ပြုံးလိုက်တယ်။ သတိုးသမီးလေးကလည်း နိုင်ကို အတောက်ပဆုံး အလှဆုံး အပြုံးကို ပြုံးပြတယ်။ ကတိတိုင်း ငါ လာခဲ့ပါတယ်ငယ်။ ခန္ဓာကိုယ် မရှိတဲ့ ဝိညာည် ဘဝနဲ့တောင် နိုင် လာခဲ့ပါတယ်။ ပျော်ပါစေငယ်။ နိုင် နှလုံးသားနဲ့ရင်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အခင်းမဖြစ်ခင် ငယ်ကြားခဲ့တဲ့ ဝုန်းဆိုတဲ့ အသံဟာ နိုင်ဆိုင်ကယ်ကို ကုန်တင် ကားကြီးက ဖြတ်တိုက်ခဲ့တဲ့ အသံမှန်း ငယ်သိခဲ့ရင်။ အဲဒီနေရာမှာပဲ နိုင်သေဆုံးခဲ့မှန်း ငယ်သိခဲ့ရင်။ ဝိညာည်ဘဝနဲ့ ငယ်ကို ကယ်ခဲ့မှန်းငယ်သိခဲ့ရင်။ သတိုးသမီးလေးပြုံးနေမှာလား။ အချို့စကားတွေဟာ မပြောလည်းသိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေ မသိတာကသိတာထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးချိန်ထိ ချစ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ မျက်ရည်စက်တွေကတော့။ ပြီးပါပြီ။ ဆူးပန်းခိုင် Credit - Thandar Myint Oo
သင် ဟာ အိပ် ရေးဝမှ ကျန်းမာမယ် ဆိုတာကို သိရက် နဲ့ ဘာလို့ ဖုန်းကိုပိတ် ပြီး သွားမအိပ် နိုင် တာလဲ?? ကျွန် တော် တို့အားလုံးဟာ ဘာလုပ် ရင် ကျန် ...
အသည်းကွဲနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ လုပ်ရပ် (၁၁) ခု
အရက်မူးပြီး ရည်းစားဟောင်းစီ စာပို့တတ်ကြတာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ ကိုယ်တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ကွဲကွာပြီးတဲ့နောက် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုဟ...
စမတ်ဖုန်းတွေပေါများလာတဲ့နောက်မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအထိပါ အရေးပါ အရာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ေ...
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ MM-Valentine apk
Valentine ဆော့ဖ်ဝဲလေး ရေးထားပါတယ်။ MM-Valentine apk ထဲမှာ – ၁။ Valentine’s day history (ချစ်သူများနေ့သမိုင်းအကျဉ်း)။ ၂။ Myanmar Love song...
ဒီ Apk လေးကတော့ သရဲစာအုပ်တွေပေါင်းချုပ်ပြီး စုစည်းမှုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတာတဲ့ apkလေးပါ။ တခုတော့သတိပေးမယ်နော်-ကြောက်တတ်သူများလုံးဝမဖတ်ကြည့်ပါ...
The Grandmaster (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action ကားထက် Biography၊ Drama ပိုဆန်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ Bruce Lee အစရှိသည့် ကွန်ဖူးသမားတွေရဲ့ ဆရာဖြစ်သူ Yip ရဲ့ အကြာင်းရိုက်ထားတာလေးပါ။ ...
၀၁မုန်းတယ်မပြောနဲ့ ၀၂ ကံဆုံခွင့် ၀၃ မနက်ဖြန်ပြောမယ် ၀၄ အချစ်များစွာယူ ၀၅ မင်းနဲ့ငါ ၀၆ မငြင်းပါနဲ့ ၀၇ နင့်အလှည့် ၀၈ ငါ့အနားပြန်ခဲ့ပါ ...
နည်းပညာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမှားယွင်းနေတဲ့ ကျန်းမာရေးယုံကြည်ချက် (၃) ခု
၁ - ဖုန်းကြာကြာပြောရင် ဦးနှောက်အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်မယ် ဖုန်းထဲကထွက်တဲ့ ရောင်ခြည်တွေကြောင့် အခုလိုဖြစ်မယ်လို့ ပြောကြပေမဲ့ သက်သေပြနိုင်တာမရှိသေးပ...
သင့် Android ဖုန်းအဟောင်းလေးဟာ အရင်လို မြန်ဆန်ပေါ့ပါးမှုမရှိတော့လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ ဒါဟာ ကွန်ပြူတာတိုင်း၊ ဖုန်းတိုင်းမှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိတ...
ဝေးရမယ်ဆိုတာကြိုသိနေမှတော့ ဘာမှလည်းတောင်းဆိုမနေလိုတော့ဘူး အချိန်တန်နှုတ်ဆက်ရတော့မှာပဲ လက်ပြလည်းလွမ်းမနေချင်တော့ဘူး အချစ်က၀မ်းနည်းစရာမကောင်းခဲ...